Wed, Jun 3, 2020 at 11:51am
आईतवार, २० माघ २०७५,	आहाखबर	2.98K
काठमाडौं, माघ २० ।
देशको शैक्षिकस्तर बढाउन सहायता पुर्याउने उद्देश्यसहित जनता बैंक नेपाल लिमिटेड र टिच फर नेपालबीच एक सम्झौता भएको छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि कार्यक्रममा सहकार्य गर्न बैंकले आइतबार उक्त सम्झौता गरेको हो ।
सम्झौतापत्रमा जनता बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयकुमार मिश्र र टिच फर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिशिर खनालले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सम्झौता अनुसार बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट टिच फर नेपाललाई बार्षिक रु. ५ लाख प्रदान गर्नेछ । उक्त कोषबाट टिच फर नेपालले विद्यालयहरुमा महत्वपूर्ण विषयका दक्ष जनशक्तिलाई ‘फेलो’ शिक्षक कारुपमा खटाउने छ ।
यसरी खटाइएका ‘फेलो’ शिक्षकहरु शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि गर्ने कार्यमा सरिक हुनेछन् । बैंकले यस सहयोगबाट ग्रामिण क्षेत्रका विद्यालय र सहरी क्षेत्रका विद्यालयको बीचमा हुने शैक्षिक असमानता कम गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेमा विश्वास समेत लिएको छ ।
टिच फर नेपालले के गर्छ ?
टिच फर नेपालले देशको ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका सरकारी विद्यालयमा ‘फेलो’ शिक्षकहरु खटाई शैक्षिक असमानता घटाउने कार्यमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
हाल यस संस्थाले सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, धनुषा, लमजुङ, दाङ र पर्साका बिभिन्न ग्रामिण क्षेत्रका ५१ विद्यालयमा १ सय १० जना ‘फेलो’ शिक्षकहरु मार्फत करिव १० हजार विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि कार्य गरिरहेको छ ।